ဒီလို နိမိတ်ပြ လက္ခဏာ တွေကို အားကစား သမားတိုင်း လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သူတိုင်း သိထားကြပါ – WunYan
ဒီလို နိမိတ်ပြ လက္ခဏာ တွေကို အားကစား သမားတိုင်း လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သူတိုင်း သိထားကြပါ
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး သိပ်မောပြီး ရေငတ်နေချိန်မှာ ရေတွေ အများကြီး သောက်ချလိုက်တာဟာ အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ အခြေအနေပါ။ ခန္ဓာကိုယ်က အပူတွေတက်နေပြီး သိပ်မောနေမယ်၊ ရေသိပ်ငတ်နေချိန် ရေတွေ အလွန်အကျွံ မော့ချလိုက်ခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဆားဓာတ်ဖြစ်တဲ့ ဆိုဒီယမ်ပမာဏ ရုတ်တရက် ထိုးကျသွားပြီး အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်သည်ထိ သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် နုံးခွေလာတာ သိပ်မောလာ၊ နှလုံးခုန်မြန်တာတွေ ဖြစ်လာတာလေးတွေနဲ့ အရင်ဆုံး နိမိတ်ပြလေ့ ရှိပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေတုန်း နှလုံးခုန် မရပ်တန့်ခင် နှလုံးမထိခိုက်ခင် ဘယ်လိုနိမိတ်တွေ ပြတတ်ပါသလဲ?
ခေါင်းတရိပ်ရိပ်နဲ့ မူးလာမယ် – ခေါင်းမူးလာတာဟာ နှလုံးသွေးစီးဆင်းမှု ကျဆင်းလာတဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်း ခေါင်းတရိပ်ရိပ်နဲ့ မူးလာရင် ချက်ချင်းရပ်တန့် အနားယူလိုက်ပါ။
ချွေးစီးတွေ ပြန်လာမယ် – ဒီနေရာမှာ ချွေးစီးပြန်တာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ ချွေးထွက်တာနဲ့ သိပ်ကွာပါတယ်။ ချွေးစေးတွေက လက်တွေ၊ ခြေထောက်တွေမှာ ဖြစ်လာပြီး ခြေဖျားလက်ဖျားတွေပါ ရုတ်တရက် အေးစက်လာပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တစ်နေရာရာမှာ နေလို့မကောင်းခြင်း – ဥပမာ လည်ပင်း၊ ပုခုံး၊ မေးရိုး နေရာတွေမှာ ထုံလာ၊ ကျဉ်လာခြင်း တဆစ်ဆစ် ကိုက်ခဲလာခြင်း ဗိုက်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီး ခံစားလာရခြင်း စတာတွေ ဖြစ်လာရင် လေ့ကျင့်ခန်းကို ချက်ချင်း ရပ်တန့်ပစ်လိုက်ပါ။
ရင်ဘတ်ထဲမှာ နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်လာခြင်း ရင်ဘတ်စူးအောင့်ခြင်း – နှလုံးသွေး မလုံလောက်တဲ့အခါ နှလုံးကြွက်သားတွေ ညောင်းညာလာပြီး ရင်ဘတ် အောင့်လာပါတယ်။ အောင့်တာက ပခုံးနဲ့ မေးရိုးတွေပါ ကျင်တက်လာတတ်သလို ရင်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီး ဖြစ်လာရင်လည်း လေ့ကျင့်ခန်းကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီး ဆေးခန်းပြသပါတော့။
ရုတ်တရက် မောလာတာဟာနှလုံးသွေးငတ်တာရဲ့ အဓိကလက္ခဏာပါ။ ခါတိုင်းထက် သိပ်မောနေပြီ မူမမှန်ဘူးလို့ ထင်နေခဲ့ရင် ချက်ချင်း ဆေးအကူအညီယူပါ။
နှလုံးခုန်မြန်လာတာ ရင်တွေ တလှပ်လှပ် ဖြစ်လာတာတွေက နှလုံးခုန် မမှန်ကန်တာ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာ ဝင်မှာကို နိမိတ်ဖတ်နေပါပြီ။ ပုံမှန်ထက် မြန်နေပြီ ရင်ထဲမှာ သိပ်ကို တလှပ်လှပ် ဖြစ်နေပြီဆိုရင် ရပ်တန့်ပြီး ဆေးကုသမှု ချက်ချင်းယူပါတော့။
ဒီလို နိမိတျပွ လက်ခဏာ တှကေို အားကစား သမားတိုငျး လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျသူတိုငျး သိထားကွပါ
ကိုယျလကျလှုပျရှားရငျး ရုတျတရကျ နှလုံးရပျ သဆေုံးခွငျးမဖွဈမီ နိမိတျပွလက်ခဏာမြား
သရုပျဆောငျ အဆိုတျော မငျးသှေး ဘောလုံးကစားနရေငျး ရုတျတရကျ သဆေုံးသှားတဲ့သတငျးကို ဖတျရငျး ကိုယျလကျလှုပျရှား လကေ့ငျြ့ခနျးတှနေဲ့ နှလုံးရပျ သဆေုံးတာကို ဆငျခွငျတှေးတောစရာ ဖွဈလာပါပွီ။
လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျရငျး လူတှေ ဘာကွောငျ့ ကှယျလှနျကွတာလဲ?
လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပွီး သိပျမောပွီး ရငေတျနခြေိနျမှာ ရတှေေ အမြားကွီး သောကျခလြိုကျတာဟာ အလှနျအန်တရာယျမြားတဲ့ အခွအေနပေါ။ ခန်ဓာကိုယျက အပူတှတေကျနပွေီး သိပျမောနမေယျ၊ ရသေိပျငတျနခြေိနျ ရတှေေ အလှနျအကြှံ မော့ခလြိုကျခွငျးဖွငျ့ ခန်ဓာကိုယျထဲက ဆားဓာတျဖွဈတဲ့ ဆိုဒီယမျပမာဏ ရုတျတရကျ ထိုးကသြှားပွီး အသကျအန်တရာယျ ထိခိုကျသညျထိ သဆေုံးသညျအထိ ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။ ရုတျတရကျ နုံးခှလောတာ သိပျမောလာ၊ နှလုံးခုနျမွနျတာတှေ ဖွဈလာတာလေးတှနေဲ့ အရငျဆုံး နိမိတျပွလေ့ ရှိပါတယျ။
လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျနတေုနျး နှလုံးခုနျ မရပျတနျ့ခငျ နှလုံးမထိခိုကျခငျ ဘယျလိုနိမိတျတှေ ပွတတျပါသလဲ?
ခေါငျးတရိပျရိပျနဲ့ မူးလာမယျ – ခေါငျးမူးလာတာဟာ နှလုံးသှေးစီးဆငျးမှု ကဆြငျးလာတဲ့ လက်ခဏာ ဖွဈပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျရငျး ခေါငျးတရိပျရိပျနဲ့ မူးလာရငျ ခကျြခငျြးရပျတနျ့ အနားယူလိုကျပါ။
ခြှေးစီးတှေ ပွနျလာမယျ – ဒီနရောမှာ ခြှေးစီးပွနျတာနဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျလို့ ခြှေးထှကျတာနဲ့ သိပျကှာပါတယျ။ ခြှေးစေးတှကေ လကျတှေ၊ ခွထေောကျတှမှော ဖွဈလာပွီး ခွဖြေားလကျဖြားတှပေါ ရုတျတရကျ အေးစကျလာပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျရဲ့ တဈနရောရာမှာ နလေို့မကောငျးခွငျး – ဥပမာ လညျပငျး၊ ပုခုံး၊ မေးရိုး နရောတှမှော ထုံလာ၊ ကဉျြလာခွငျး တဆဈဆဈ ကိုကျခဲလာခွငျး ဗိုကျထဲမှာ တဈမြိုးကွီး ခံစားလာရခွငျး စတာတှေ ဖွဈလာရငျ လကေ့ငျြ့ခနျးကို ခကျြခငျြး ရပျတနျ့ပဈလိုကျပါ။
ရငျဘတျထဲမှာ နမေထိထိုငျမသာ ဖွဈလာခွငျး ရငျဘတျစူးအောငျ့ခွငျး – နှလုံးသှေး မလုံလောကျတဲ့အခါ နှလုံးကွှကျသားတှေ ညောငျးညာလာပွီး ရငျဘတျ အောငျ့လာပါတယျ။ အောငျ့တာက ပခုံးနဲ့ မေးရိုးတှပေါ ကငျြတကျလာတတျသလို ရငျထဲမှာ တဈမြိုးကွီး ဖွဈလာရငျလညျး လကေ့ငျြ့ခနျးကို ခကျြခငျြးရပျတနျ့ပွီး ဆေးခနျးပွသပါတော့။
ရုတျတရကျ မောလာတာဟာနှလုံးသှေးငတျတာရဲ့ အဓိကလက်ခဏာပါ။ ခါတိုငျးထကျ သိပျမောနပွေီ မူမမှနျဘူးလို့ ထငျနခေဲ့ရငျ ခကျြခငျြး ဆေးအကူအညီယူပါ။
နှလုံးခုနျမွနျလာတာ ရငျတှေ တလှပျလှပျ ဖွဈလာတာတှကေ နှလုံးခုနျ မမှနျကနျတာ နောကျဆကျတှဲပွဿနာ ဝငျမှာကို နိမိတျဖတျနပေါပွီ။ ပုံမှနျထကျ မွနျနပွေီ ရငျထဲမှာ သိပျကို တလှပျလှပျ ဖွဈနပွေီဆိုရငျ ရပျတနျ့ပွီး ဆေးကုသမှု ခကျြခငျြးယူပါတော့။